Maninday Toliara : Tovovavy maty noloara-maso -
AccueilSongandinaManinday Toliara : Tovovavy maty noloara-maso
Maninday Toliara : Tovovavy maty noloara-maso
28/02/2018 admintriatra Songandina 0
Tovovavy manodidina ny 14 taona no hita faty tao Maninday, teo amin’ny lalana 500 metatra tsy ahatongavana any amin’ny oniversiten’i Toliara, omaly vao maraimbe. Vata mangatsiaka efa tsy nisy aina intsony no novantanin’ireo mponina tany an-toerana, izay nivoaka ny trano vao maraina. Izy ireo no nampandre ny mpitandro filaminana avy hatrany taorian’izay. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny kaomisaria foibe any an-toerana, taorian’ny fitsirihina ny razana, izay nataon’izy ireo niaraka tamin’ny dokotera, dia fantatra fa noloaran’ireo tsy mataho-tody ny mason’ity niharan-doza ity havia, raha toa ka tsy naninona, ary mbola hita tao ny havanana. Tsy nahitàna trangana fanolanana na fahaverezan-javatra kosa tany amin’ity tovovavy izay marihina fa mipetraka eny amin’ny faritra manodidina ihany. Raha ny voalazan’ireo polisy nandray an-tanana ny raharaha, dia novonoina tany amin’ny toeran-kafa ity niharan-doza ity vao natsipy teo amin’io arabe io. An-keviny nanohitra ireo nahavanon-doza ihany koa ity farany, satria ankoatra ny rà nivoaka sy ny mangana teo ambony masony, dia nahitana ratra hafa ihany koa teo amin’ny faritry ny tanany.
Tsy fantatra hatreto izay nahavita izao habibiana tsy roa aman-tany izao, ary efa eo anatin’ny fanadihadiana sy ny fitadiavana ny marina mahakasika izany mihitsy ny polisy ao amin’ity distrika ity amin’izao fotoana izao. Manoloana ny zava-misy, dia mihorohoro ary mivarahontsana tanteraka ny mponina any Toliara, izay mieritreritra fa misy olona manao “opération” resaka maso any amin’izy ireo. Raha tsiahivina tokoa mantsy, dia tsy vao sambany no nisy tranga tahaka ity tany an-toerana, ary saika zaza tsy ampy taona avokoa no lasibatr’izany. Fanintelony tamin’ireo niharan’io fandoarana maso io nanomboka tamin’ny fiandohan’ity taona ity , io tovovavy manodidina ny 14 taona io. Tany amin’ny fokontany Belavenoka, kaominin’Ankililoaka ny tranga voalohany, raha toa ka tao amin’ny fokontany Belalanda ny tranga fanindroany.. Manao antso avo fanairana ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny any an-toerana noho izany ireo vahoaka mba hijery akaiky ny toe-draharaha izay mitady hanjaka sy hahazo vahana. Efa natolotra ny fianakaviany, io omaly io ihany moa ny vata mangatsiakan’ity zazavavy ity.